Noocyada Dhibaatooyinka Araga Iyo Sababaha Keena. |
Ishu waa xubin kamida xubnaha jidhka ugu muhiimsan, waana qaybta araga u qaabilsan noolaha, hadaba indhaha aadamuhu waxay ka koobantahay guud ahaan sadex qaybood oo kala ah:
Qaybta cad iyo lensiska oo iftiinka ku duwa xagga hore ee isha,
Xuubka dambe (retina), oo ah xuub iftiinka dareema oo ku yaalla xagga dambe ee isha,
iyo dareemeyaasha aragga (optic nerves), oo ah tiro badan oo ah xadhko isgaahsiin oo taga maskaxda.
Dad badan ayaa leh dhibaatooyin aragga ah oo u baahan inay gashadaan muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha (contact lenses). Saddexda dhibaato ee aragga ee ugu tirada badani waa:
Magaca dhakhaatiirtu u yaqaanaan fogaan aragga waa ‘hypermetropia’. Dadka leh fogaanta aragga waxa dhib ku ah aragg waxyaabaha u dhaw. Sababta taa keenaysaa waxa weeye kubbadda isha oo aad u gaaban, taasoo keenaysa in falaadhaha iftiinka ee ku wareegsan waxayaabaha ay gaadhaan xagga dambe ee xuubka dambe (retina) ka hor intaan qaybta cad (cornea) iyo lensisku qaloocin falaardhaha iftiinka.
Fogaanta aragu waxa way badanasaa siina xumaanayaa marka aad sii gabowdidba, waxa kale oo uu saameyn karaa habka aad u aragtid ashyaada fogfog. Dadka leh fogaan arag waxay badanaa u baahan yihiin inay xidhtaan muraayado sixid arag leh sida muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay wax u akhriyaan, u qoraan una qabtaan hawlo faahfaahsan.
Magaca dhakhaatiirtu u yaqaanaan dhawaan aragga waa ‘myopia’. Dadka qaba dhawaan aragga waxa dhib ku ah aragga waxyaabaha ka fogfog sababta oo ah kubbadda isha ayaa aad u dheer. Tani waxaa loogu jeeda in qiyaasta ay isku jiraan qeybta kore ee isha iyo xubka danbe (retina) ayaa kala dheer. Markii aan shey eegno, iftiinku wuxu soo maraa isha wuxuna gaadhaa xuubka danbe. Haddii qeybta hore ee isha aad uga fog yahay xuubka danbe iftiinka wuxu istaaga qeybta hore e xuubka danbe intii u xuubka danbe gabigiisuba iftiimi lahaa, taaso dhibaateeynasa in waxyaabaha fog fog si fiican loo arko.
Dadka qaba dhawaan aragga waxay badanaa u baahan yihiin inay xidhaan muraayado sixid arag sida muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay baabuur u wadaan una qabtaan hawlaha shaqo ku leh eegista waxyaabaha fogfog. Dhawaan aragga waxa marmarka qaarkood lagu daweeyaa qalitaan laysar.
Cawarnaanta Cawarnaantu (astigmatism) waa marka isha qaybta caddi aanay si siman u sameysnayn, taasoo keenaysa in iftiinku ku kulmo qaybaha qaarkood ee shay, laakiin aanuu dhamaan shayga ku kulmin. Dadka aan wax dhib ah aragga ka qabin qaybta cad ee ishoodu waxay leedahay qaab ah kubbadda koleyga, halka dadka qaba cawarnaan uu qaabka isha qabteeda caddi ay leedahay qaab ah kubbadda rugbida.
Dadka qaba cawarnaanta waxay caadi ahaan u baahan yihiin inay xirtaan muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay u saxaan araggooda.
Arag wax-ka-qabid waxa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo dadka indho la’ ama bar ahaan wax arka, ee loolama jeedo dadka qaba fogaan arag ama dhawaan arag. Qofka aragga waxa ka qaba araggii ayaa wax ka lumay ama araggiisii ayaa doorsoomay. Iyadoo ay ku xiran tahay sida lumidda araggu u daran tahay, waxa xaaladaha loo yaqaana ‘arag bar ah’ ama indho la’aan.
Arag kala dhiman.
Qof leh araga badhka ah ama arag sida ba’an u hooseeya in kastoo aragiisu hadana ma indho la’. Waxa tan uu Ururka Caafimaadka Adduunku ku qeexay (World Health Organisation) qofka aan si cad u arki karin inta farood ee la tusay ee u jira fogaan ah 6 mitir ama ka yar (xiitaa isagoo gashan muraayadaha indhaha ama lensis).
Indho la’aan Qofka indho li’i waxa uu qabaa lumid arag oo aad u daran mana awoodi karo inuu si cad laakiin wali waxa uu leeyahay rajo ah in uu wax arko waayo waxa uu dhaamaa qofka aan wax ba arkayn haba yaraatee.
Xigasho Daryeel Magazine.
XINIINYO RAG KALE KU XAASH-XAASH